एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष डाक्टर पौडेले पठाए लम्साललाई जवाफ – Durbin Nepal News
एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष डाक्टर पौडेले पठाए लम्साललाई जवाफ निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अहिले केही भन्न सक्दिन: लम्साल
तोया दाहाल ३० चैत्र २०७५, शनिबार ०५:३५
निर्वाचनको सँघारमा एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सूर्यलम्सालले पठाएको माग पत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलले शुक्रवार अपरान्ह लम्साललाई इमेल पठाएका छन् । लम्सालले दूरबिन नेपालसँग कुरा गर्दै भने “पौडेलले पठाउनु भएको जवाफमा सदस्यताका सम्बन्धमा मेरो सरोकार र सवाललाई कार्यसमिति र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने भनिएको छ । समस्यालाई स्वीकार गरेको मेरो बुझाई हो ।”
सदस्यता बन्ने प्रक्रियाको समस्या पहिचान र सम्बोधन नभई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नमिल्ने लम्सालले जिकिर गरे । त्यस्तो हो भने तपाईँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ की हुन्न ? भनी गरिएको प्रश्नमा लम्सालले भने “पुरा जवाफ आएको छैन । निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अहिले केही भन्न सक्दिन ।”
निर्वाचन आयुक्तको विषयमा डाक्टर पौडेलले पठाएको उत्तरका सम्बन्धमा लम्सालले भने “निर्वाचन आयुक्तका विषयमा कुनै गुनासो आफू कहाँ नआएको पौडेलले बताउनु भएको छ । साधारणसभाले नै निर्वाचन समिति गठन गरेको पौडेलले पत्रमा लेख्नु भएको छ ।”
झण्डै एक वर्ष अगाडि साधारण सभाले निर्णय गरेर आएको निर्वाचन समितिले मनोनयन आह्वान गरिसकेपछि मात्र किन तपाइले समस्या देख्नु भयो ? भनी गरिएको प्रश्नमा लम्सालले भने “मसँग निर्वाचन आयुक्तको विषयमा थुप्रै गुनासा आए । त्यसैले अध्यक्षलाई तपाईँलाई पनि गुनासोहरू आए की आएका छैनन् भनी सोधेको हुँ ।”
साधारण सभाले गरेको निर्णय कार्यसमितिले उल्ट्याउन सक्दैन । विधानले नै कार्यसमितिलाई अधिकार नदिएको विषयमा अन्तिम समयमा तपाईँको यस्तो माग कसरी सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने लाग्छ ? भनी गरिएको अर्को प्रश्नमा लम्सालले भने “धेरैको शङ्का र गुनासो आएपछि मैले पत्रमा लेखेको हुँ । विवादित व्यक्तिले राजीनामा दिएमा समस्या हल हुन सक्छ ।”
अन्तिम समयमा अपूर्ण निर्वाचन समितिबाट निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन झनै समस्या हुन्छ । निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिन वा फेरबदल गर्न निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर साधारण सभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा कार्यसमितिले निर्वाचन समितिलाई चलाउन सक्दैन । तपाईँले आकस्मिक साधारण सभा बोलाएर यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्न खोज्नु भएको हो ? भनी गरिएको प्रश्नमा लम्सालले भने “त्यस्तो भन्न खोजेको होइन ।”
३० चैत्र २०७५, शनिबार ०५:३५ मा प्रकाशित
Email : durbinn[email protected]